Ny Fasoracetam nootropic malaza indrindra: inona no omeny antsika?
Ny zava-drehetra momba Fasoracetam
1. Tantara sy niandohan'ny Fasoracetam
2. Fomba fiasa
3. Tombontsoa mahavariana momba Fasoracetam
4. Famaritana ny Dosage of Fasoracetam
5. Ny voka-dratsin'ny Fasoracetam
6. Famerenana sy traikefa amin'ny fampiasana Fasoracetam
7. Ahoana ary aiza no hividianana Fasoracetam
Ny Nootropics dia iray amin'ireo fironana vaovao mitranga ankehitriny amin'ny Fasoracetam mitarika ny fitarihana. Io no iray amin'ireo nalaza malaza indrindra eny an-tsena izay tian'ny olona maro hampiasa ny fahaiza-manaony. Manaiky ianao fa raha manao ny asa fanaovan-dry zareo isan'andro, dia mila sakafo mihoatra noho ny sakafo fotsiny ianao. Indraindray, mety hahita ny tenanao amin'ny toe-javatra iray ianao, na manao ahoana na manao ahoana ny ezahanao hihinanan-tena madio, fampiasana, matory tsara, mbola misy olana mbola miezaka ny hifantoka sy handrisika anao.
Ankoatra izany, eto amin'ity tontolo ity no ianarantsika zavatra vaovao isan'andro, ny atidohanao dia mety ho tratran'ny tebiteby ka manomboka tsy dia mifantoka loatra. Ny tsy fahampian'ny torimaso sy ny fitsaharana dia mety hampiharatsy azy bebe kokoa aza ary hiady amin'ny fiheverana ara-tsaina hatrany ny fotoana rehetra mety tsy ho azo atao.Izao no mahatsikaritra fa mila fanampim-panazavana izay afaka manatsara ny asanao ara-tsaina raha tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamanao. Tsy mahagaga raha efa niaina ireo zava-mahadomelina ireo ny manam-pahaizana mba hiatrehana ny fahalemen'ny fahaizana ara-tsaina amin'ny olombelona. Tsy manampy azy ireo amin'ny fandrosoana fotsiny izy ireo fa mandray anjara mavitrika amin'ny fanampiana azy ireo hianatra bebe kokoa.
mandray Fasoracetam dia iray amin'ireo fomba izay afaka manampy ny herinao amin'ny andro, amin'ny fiantohana fa manana ny hery sy ny hatsarana ilainao ianao.
Antsoina koa hoe NFC-1, LAM-105, ary NS-105, Fasoracetam (110958-19-5) dia efa nisy hatramin'ny 1990 voalohany. Izy io dia sokajiana ho iray amin'ny fianakaviana racetam amin'ny zava-mahadomelina ary novolavolain'i Nippon Shinyaku, orinasa Japoney Pharmaceutical izay nokasaina hatao amin'ny fanasitranana ho an'ny fitsaboana vascular. Ny orinasa dia nampiasa mihoatra ny $ 200 tapitrisa tamin'ny fikarohana momba ny zava-mahadomelina na dia tsy nahomby aza tamin'ny 3 taper satria tsy ampy ny vokatra.
Taorian'ny fandaozana azy, dia navitrika indray ny tombotsoan'ny fanampiana tao amin'ny 2013 avy amin'ny orinasa antsoina hoe Neurofix taorian'ny nividianany ny angona avy amin'ny Fasoracetam tao Nippon Shinyaku. Ny Aévi Genomic dia nahazo ny Neurofix ary nanomboka nanao fitsapana ara-pitsaboana momba ireo tanora izay nijaly noho ny tebiteby, otisma, ADHD ary koa ireo izay manana fifandimbiasam-bolo mitana ny glutamate.
Ao amin'ny 2015, ny Programme des Sciences d'Etudes d'Etudes d'Etudes Etats-Unis sy ny Drug dia namela ireo mpandraharaha ao Fasoracetam hanomboka hitarika ny fitsapana ataon'izy ireo amin'ny olombelona ary koa mandefa ny zava-mahadomelina manerana ny lalam-panjakana. Amin'izao fotoana izao, Fasoracetam dia ao anatin'ny dingana 2 amin'ireo fitsapana amin'ny toeram-pitsaboana izay manadihady ireo mpikaroka raha mahasoa ny fitsaboana ny aretim-pisefoan'ny autism.
Tahaka ny tsena rehetra eny an-tsena, dia mbola tsy azon'izy ireo tsara ny fomba fiasa Fasoracetam. Na izany aza, ny fikarohana natao dia mampiseho fa miasa amin'izany fomba izany;
Izany dia mampitombo ny mpitsabo hita ao amin'ny cortex ho an'ny asidra gamma-aminobutyric izay transmitter inhibitory. Ny Fasoracetam dia manatsara ny asan'ny GABA-B, ka mampitombo ny habetsahan'ny GABA eo amin'ny rafitra rafitra sy ny ati-doha.
Ny glutamate ihany koa dia ny prefektora GABA ary izy no tena mpandidy ny neurotransitera izay manatsara ny fianarana, mampihena ny ahiahy, mampiroborobo ny torimaso, ary mampitony ny vokatra.
Mampitombo ny habetsaky ny acetylcholine avoakany avy amin'ny taratra matevina. Ny acetylcholine dia neurotransmitter izay hita ao amin'ny thebrrain ary ny andraikiny dia ny hampitombo ny fahatsiarovana, ny fianarana ary ny fahalalana ankapobeny. Fasoracetam dia miasa koa amin'ny cholinergic amin'ny fampitomboana ny famoahana ny choline ao amin'ny hippocampus sy ny cortex. Choline dia sakafo mahavelona izay mitana andraikitra lehibe amin'ny famoronana acetylcholine manerana ny atidoha.
Ny fihanaky ny cholinergic dia tsy mitranga amin'ny Fasoracetam, fa mitranga ihany koa amin'ny aniracetam, piracetam ary ny tsy misy hafa rehetra hita ao amin'ny fianakaviana racetam. Fantatra amin'ny fanatsarana ny lafiny rehetra amin'ny fahalalana rehetra izy ireo. Indraindray dia mety hisy ny fangatahana avo lenta ho an'ny choline ao amin'ny vatana mba ho fongana. Vokatr'izany dia mety hitarika ho amin'ny toe-tsaina marefo, ny zavona ao amin'ny atidoha, ary ny aretin'andoha. Mba hiatrehana izany vokatra izany, dia afaka mandray choline fanampiny ianao.
Fomba iray hafa amin'izany Fasoracetam miasa dia amin'ny fampiasana ny karazana glutamate ho an'ny mpitsidika fantatra amin'ny anarana hoe metabotropic glutamate receptors (mGluRs). Ny mGluRs dia manatanteraka asa samihafa ao amin'ny atidoha, anisan'izany ny fampivoarana ny fianarana sy ny fahatsiarovan-tena ary koa ny fiahiahiana. Ny mGluRs valo izay nahitana valo dia miasa an-tanana amin'ny fitazonana ny fifandanjana amin'ny roa amin'izy ireo izay mampitombo ny fientanam-pandrenesana. Ireo mGluRs enina hafa dia manampy amin'ny fampihenana ny mety ho voka-dratsin'ny neurotoxicity amin'ny fampihenana ny fientanam-pandrenesana. Ny glutamate dia tena ilaina ao amin'ny vatana satria izy io dia mpandàla ny tsy fahasalamana.
Raha misy tsy fitoviana amin'ny glutamate ao amin'ny vatana, dia mety ho voan'ny aretina ara-tsaina sy ara-batana isan-karazany, anisan'izany ny; epilepsy, schizophrenia, ADHD, aretina mampihorohoro sy aretin'ny neurodegenerative, ohatra, ny aretin'ny Alzheimer.
Tamin'ny fikarohana natao tamin'ny biby, dia nanaporofo ny fahombiazan'ny Fasoracetam ny asan'ny mGluRs mibolisatra roa ka mahatonga ny fihenan'ny glutamate ao amin'ny atidoha. Amin'ny toe-javatra hafa, ny Fasoracetam dia afaka mifehy ny mpitsabo rehetra amin'ny glutamate metabotropika ka mitarika ny famerenana ny fandanjana amin'ny glutamate manontolo. Izany no antony nahatonga ny Fasoracetam ho tombontsoan'ny olona rehetra manana ADHD, toe-javatra mifandray amin'ny haavon'ny glutamate fa tsy mihetsika fotsiny.
Noho izany, azontsika atao ny milaza fa ny Fasoracetam dia miasa amin'ny solosaina solosaina telo mba hanome valiny mitovy amin'izany. Ny zavatra voalohany ataony dia ny miasa amin'ny choline neurotransmitter ary mampiroborobo ny asa ataon'ny mpandray azy. Faharoa, mamporisika ny fitomboan'ny isan'ny mpitsabo GABA izy io, ary farany dia manova ny glutamate receptors. Ireo fihetsika rehetra ireo dia mitarika fanatsarana ny fahafaha-manaon'ny mpampiasa Fasoracetam.
Miorina amin'ny fanadihadiana isan-karazany natao teo amin'ny sehatry ny 1 sy ny stage 11 amin'ny fitsapana ara-pahasalamana momba ny Fasoracetam dia ny ankamaroan'ny tombontsoa azony. Andao hijery lalindalina kokoa ny soa entin'izany eo amin'ny latabatra.
Primary Prescription amin'ny ADHD
Ankehitriny, ny ADHD dia iray amin'ireo toe-piainana miparitaka indrindra amin'ny olon-dehibe. Izany dia satria ny ankamaroan'ny olona dia miasa amin'ny asa maro miaraka amin'ny fotoana izay mitarika ho amin'ny fihenan'ny fotoana fisainany. Fasoracetam dia ampiasaina ho ny prescription lehibe indrindra amin'ny marary ADHD. Manao asa sy haingana izy io mba hanamaivanana ny soritr'aretina. Ny zavatra rehetra tokony ho fantatra alohan'ny hividianana SARMs
Rehefa misy fiovana ao amin'ny voka-dratsin'ny GABA, ary misy fanovana ny mpitsabo azy, mety hisy ny fahaketrahana eo amin'ny depression. Izany dia noho ny hafa fa tsy mampitony loatra ny fientanam-po; Manara-maso ihany koa ny neurogenesis sy ny fitomboan'ny neurogenesis. Ny alahelo dia mampihena ny fahaterahan'ny neurône vaovao izay tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny fahalalana sy ny toe-tsaina. Rehefa manindry ny neurogenesis, ny rafitra GABA dia manampy amin'ny fifehezana ny toe-javatra.
Mampandroso ny lanjan'ny fifantohana sy ny fitarainana
Ny fampidirana Fasoracetam matetika dia afaka mampitombo ny fifantohanao. Manala ny tsy fahampian-tsakafo izay mety mahatonga ny fahakiviana sy ny fahaketrahana. Fasoracetam dia mamporisika ny famerenana ny choline izay manampy amin'ny fanatsarana ny fifantohana amin'ny saina sy ny fifantohana. Ny Choline dia fantatra amin'ny fanampiana amin'ny fikolokoloana ny tsy fitovian'ny rafitra ao amin'ny sela, ny neurotransmission ary ny famokarana homocysteine.
Ankoatra izany, ny choline dia amidy kokoa amin'ny acetylcholine izay atahorana haingana ny fiafarana nerve mba hanampy amin'ny famindrana hafatra vaovao. Ny acetylcholine dia manatsara ny fitakiana ny valinteny izay midika fa manatsara ny fahamalinana izy ary manampy amin'ny fiarovana ny saina.
Ampitomboy ny fahaiza-mianatra
Ny fahasamihafana eo amin'ireo mpianatra ambony sy ireo marefo dia ny fahaiza-manao tsara izay fantatry ny mpianatra tsara. Rehefa manatsara ny fahaiza-manao ny fahaiza-misaina, dia mianatra satria mora sy haingana. Raha vao mampiasa Fasoracetam ianao, dia mihamitombo ny fahaizanao misaina, ary mihamatanjaka ny fahaizanao ara-tsaina. Mihamitombo ny fametrahana fampiasa vaovao vaovao amin'ny alalan'ny fanamorana cholinergika ny asa atao amin'ny neuronal.
Fasoracetam dia miasa amin'ny fampitomboana ny ambaratongan'ny choline ao amin'ny atidoha izay manampy amin'ny fisorohana ny fihenan'ny tambajotra dendritika. Manamora ny fatran'ny metabolista haingana izy io. Ny fihenan'ny Fasoracetam dia mifandray amin'ny fitomboan'ny herin'ny hery indrindra indrindra rehefa raisina ho fitsaboana.
Manana fananana anxiolytic mahery
Ny tebiteby dia mahasoa rehefa manomana ny saina ho amin'ny fifaninanana indrindra raha eo amin'ny sehatra ara-batana izany. Na izany aza, raha eo amin'ny toerana avo kokoa ny haavony dia mety hanelingelina ny fahombiazan'ny fahaizana ara-tsaina izany. Ny fanahiana dia miteraka fisalasalana, tsy fahafahana mandray fanapahan-kevitra ary manasarotra ny hieritreritra. Ny ady hampihenana ny tebiteby dia asa iray mandritra ny androm-piainana izay mety mitaky anao hanova ny andronao mba hisorohana ny fifehezan-tena izay vokatry ny tahotra sy ny alahelo.
Ny fanahiana dia vokatry ny tsy fahampian'ny fitaovam-pihetseham-batana sy ny kognitive rehefa fantatra fa manampy amin'ny fomba manan-danja ireo nootropic. Ny iray amin'ireny nootropic dia Fasoracetam izay ahafahana mampihetsi-po sy manam-pahaizana momba ny fitsaboana izay manampy amin'ny fanatontosana ny GABA amin'ny atidoha mba hanakanana ny asa fikajiana fanampiny. Ireo hetsika ireo dia manatsara ny fahaiza-miteny mangarahara ary koa mampitombo ny antony manosika kokoa ny fiarahamonina.
Na dia maro karazana mpanao solosaina hafa azo ampiasaina amin'ny asa toy izany, dia safidy tsara kokoa ny Fasoracetam. Ny anton'izany dia satria miasa amin'ny famongorana ny anxiolytics rehefa ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra. Ireo izay ampiasao Fasoracetam dia afaka miaiky fa tsy miteraka fiankinan-doha fa miteraka fanafody tsy misy fandeferana noho ny fiankinana. Rehefa mandanjalanja ny lalan'ny GABA sy glutaminergic, dia mihena ny fahafahan'ny sigara sy ny sedation tafahoatra.
Mety hisoroka ny fahatsiarovan'ny fahatsiarovana izany
Ny fampiharana ny fahavoazana amin'ny fahatsiarovan-tena dia manahiran-tsaina loatra indrindra indrindra rehefa tsy mahatsiaro na mahatsiaro zavatra na zavatra mahazatra akory aza ianao. Mety mahatsapa ny fahatokisan-tena, ny fahamendrehana ary ny fahaleovan-tena ny fampihenana ny tsy fahampian'ny fahatsapana. Ny Fasoracetam dia fantatra amin'ny hoe manampy ny iray hijanona ho maranitra ara-tsaina sy ho fatiantoka kely kokoa.
Ny fikarohana natao tamin'ny raty dia nahatonga ny Fasoracetam hisoroka ny olana fahatsiarovan-tena vokatry ny baclofen, mpikatroka ho an'ny mpandray ny GABA-B. Notaterina ihany koa ny fampihenana ny amnesia amin'ny fampitomboana ny halavan'ny acetylcholine sy amin'ny fampihenana ny vokatra vokatry ny famindrana ny GABA-B.
Manatsara ny antony manosika
Raha te-hitoetra ho maotina ianao rehefa manao ny asanao andavanandro, dia tokony hahazo fahombiazana ianao. Androany, maro ny zava-mahadomelina nampanantena fa hanampy olona iray hahatratra izany saingy vitsy dia vitsy ny manafaka. Ny vahaolana nootropic dia tsy hoe fampanantenana fotsiny fa manome vokatra mahagaga indrindra amin'ny fampivoarana ny fampiroboroboana. Ny fampivoarana ny fahaiza-manao antenaina dia midika fa tsy vitan'ny hoe mikendry fotsiny ianao fa manana fomba fijery sy fomba fijery malalaka.
Ny fisedrana natao tamin'ny biby dia mampiseho fa rehefa lasa ny fitantanana io zava-mahadomelina io, dia lasa mamorona kokoa izy ireo. Afaka mihazona mihoatra noho izay azony alohan'ny handraisana azy ireo izy izao. Toy izany koa ny olona. Afaka mifantoka bebe kokoa amin'ny fanatratrarana ny tanjony sy ny andraikiny. Ny fitomboan'ny dingan'ny motivation dia manampy anao hiatrika ny fiainana amin'ny fomba tsara sy mahomby kokoa izay nataon'izy ireo taloha.
Miasa toy ny fandeferana
Io nootropic dia manao asa goavana ho famporisihana satria izy io dia afaka manampy amin'ny fanavaozana ny asan'ny atidohanao, ka mahatonga azy io hamelombelona azy mandritra ny fotoana maharitra. Avy amin'ny fanamarihan'ny Fasoracetam, afaka milaza ianao fa maro ny olona no tia ny fahatsapana mamelombelona.
(1) Dosage Information
Tao amin'ny fitsaboana iray natao tamin'ny marary ADHD, dia narindra ny doses tamin'ny 100, 200 ary 400 mg. Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny mpampiasa dia nitatitra fa nahomby i Fasoracetam tamin'ny dosage teo anelanelan'ny 100-800mg isan'andro. Azo atao ihany koa ny manazava Fasoracetam, izay midika fa afaka mametraka azy eo ambanin'ny lelany miaraka amina doka eo anelanelan'ny 5-15mg isan'andro.
Ho an'ny dosie avo Fasoracetam izay tsy hanaiky anao amin'ny akony, dia afaka mitondra 100mgs isan'andro ianao. Raha vao manomboka ny Fasoracetam ianao, dia afaka misafidy kely kokoa amin'ny doka kely ianao. Ny iray nomerao dia 10-15mg isaky ny doka, fara-fahakeliny, isan'andro, fara fahakeliny. Manampy amin'ny 30-50mg isa isan'andro izany. Rehefa avy nandinika ianao raha afaka mandefitra ny zava-mahadomelina ny vatanao, dia azonao ampitomboina ny dosage. Ny fitsaboana iray dia mety hitarika amin'ny fihinam-bolo sy ny boka, noho izany dia mila mitandrina ianao tsy haka loatra.
Ny fotoana tsara indrindra ahafahana mandray Fasoracetam dia maraina alohan'ny hisakafoanana. Most Faracetam reviews dia milaza fa amin'izany fotoana izany dia manome vokatra tsaratsara kokoa. Ny fanesorana azy alohan'ny hatory dia mety hahatonga anao hiresaka olana amin'ny fijerena torimaso.
Fasotaretam dia azo antoka raha raisina ny antitra sy ny tanora. Na izany aza dia mitaky fotoana maharitra kokoa ho an'ny olon-dehibe zokiolona ny manala ny zava-mahadomelina amin'ny rafitra. Azon'izy ireo atao koa ny manakatra ny tahan'ny rà ambony raha eo amin'ny dosage ambany ambany Fasoracetam raha oharina amin'ny tanora.
Ny antony mahatonga an'io nootropic io matetika dia noho ny halaviran'ny Fasoracetam fohy izay midika fa mihodina haingana amin'ny vatany izany.
Tsara ny maka Fasoracetam amin'ny tenany ihany, fa ny olona sasany dia mety maniry ny haka azy io. Mandritra ny fametahana, manaisotra miaraka amin'i Fasoracetam miaraka amin'ny hafa ianao nootropics. Vokatr'izany dia azonao atao ny mamolavola tsiranoka kokoa avy amin'ny Fasoracetam.
Ity stack ity dia iray amin'ireo vala mahery indrindra noho ny antony sasany. Raha vantany vao tafapetraka ny fanampim-bary roa, dia misy ny fiakaran'ny haitao acetylcholine ao amin'ny atidoha ka manome ny fahatsapana tsara indrindra. Fasoracetam no mpanohana ny GABA-B tsara indrindra, hanatsara ny fifantohan-tsainao izany, ary ny koluracetam dia hampitombo ny fahatsapanao.
Ny coluracetam, Fasacacetam stack dia voalaza fa manampy amin'ny aretin'ny neurolojia, ny fampivoaran'ny fihetseham-po, ary ny fifantohana. Raha te haka tapa-kazo izay hitazona anao hifantoka sy handanjalanja, dia tokony hieritreritra ianao fa haka ity paka ity.
Ny dosage dia midika; 15mg Fasoracetam (110958-19-5) sy 10mg Coluracetam nalaina indray mandeha na indroa isan'andro.
Raha mitombo ny fifantohan-tsaina rehetra ataonao, dia izao no fiarovana tsara indrindra amin'ny Fasoracetam. Na ny Fasoracetam (110958-19-5) sy ny Noopept dia nampiakatra avy amin'ny choline mba hampisy fiantraikany mahery vaika.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fakana ity poketra ity dia ny manampy amin'ny fifantohana amin'ny kognitive sy ny fampitomboana ny toe-javatra mitranga raha tsy mamela anao ho reraka. Ho an'ny doka iray izay hitazona anao hifantoka isan'andro, ity no safidy tsara indrindra.
(3) Faharetan'ny Fasoracetam
Mety hahatsapa ny fiantraikan'ny Fasoracetam ara-pahasalamana ianao rehefa afaka telo minitra amin'ny fampiasana azy. Rehefa raisina an-tsoratra amin'ny antsipiriany, dia miteraka haingana ny vokatra, ary mety hahatsapa ny vokatra Fasoracetam ianao ao anatin'ny folo minitra monja. Ny vokatr'izany dia mety haharitra valo ora. Ny antsasaky ny Fasoracetam dia manodidina ny roa na telo ora ary mbola mitazona ao amin'ny vatana amin'ny fampiasana tsy tapaka.
(4) Fiaraha-miasa amin'ny zava-mahadomelina
Tsy misy fanafody marobe izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny Fasoracetam. Ny hany zava-mahadomelina mety hifaneraserana aminy dia ny endibota, ny fikambanana izay miasa amin'ny fidirana amin'ny mpandray ny GABA. Matetika izy io dia ampiasaina hanatsarana ny asan'ny cognitive ary hampihenana ny tebiteby.
Ny Fasoracetam dia mampitombo ny valim-panafody amin'ny alalan'ny fampitomboana ny habetsahan'ny receptors GABA-B sy ny fampihenana ny fandeferana amin'ny toetrandro. Raha fantatrao fa misy olana ara-pahasalamana na voan'ny fanafody voapetraka, dia tokony hieritreritra ny hiresaka amin'ny dokotera aloha ianao alohan'ny handraisana ny Fasoracetam.
Ny vehivavy bevohoka dia nodidiana hiala amin'ny zava-mahadomelina. Tsy mamaritra ny maha-lahy na maha-vavy raha tsy azonao raisina ity fanampiana ity; Na izany aza, dia mety ho antony iray mamaritra ny lanjany.
Ara-dalàna fa ny voka-dratsiny rehetra dia mety hisy vokany hafa. Ity zava-mahadomelina ity dia fantatra fa tsy azo antoka, ary tsy fahita firy amin'ny fiantraikan'ny Fasoracetam ianao raha manapa-kevitra ny hampiasa ny Fasoracetam. Na izany aza dia zava-dehibe ny manamarika fa ny vatantsika sy ny atidoha dia samy hafa ary noho izany, tsy misy antoka fa tsy hijaly na oviana na oviana na dia misy olona hafa aza nitatitra fa tsy nisy fiantraikany teo amin'ny fiantraikan'ny Fasoracetam. Ny sasany dia ny fanehoan-kevitra ara-pihetseham-po mahazatra izay mety hanalavitra fotoana, fa raha mbola mitohy izy ireo dia mety hampiato ny fampiasana Fasoracetam.
Ny fahombiazan'ny fijaliana vokatry ny voan'ny Fasoracetam dia miankina amin'ny zavatra sasany, ary ny fomba ampiasanao an'io nootropic dia mamaritra ny fahasarotana. Ny fatra mahazatra dia iray amin'ireo antony voalohany mahatonga ny fiantraikany. Mety hampitombo ny mety ho vokatry ny fiantraikan'ny pesta Fasoracetam ny fampiasana be loatra loatra. Raha te hahazo vokatra tsara fotsiny ianao, dia omena anao fa tsy ampy fotsiny ny dosage Fasoracetam; Raha tsy izany, dia mety hiafara tanteraka ny vatanao sy ny atidanao ka mahatonga ny vokatra tsy azo tsapain-tanana.
Ireto ny sasany amin'ireo vokatry ny Fasoracetam izay notaterina;
Ny fijaliana vokatry ny fikorontanan'ny gastrointestinal, izany hoe, ny aretim-pivalanana, ny fikorontanan-tsaina, ny fikorontanana ary ny fihinana dia iray amin'ireo vokatra mahatsiravina indrindra ataon'ny maro amin'ny olona. Mba hisorohana anao tsy hijaly amin'izany, dia raiso ny dosa tsara ary ampiasao mandrakariva ny Fasoracetam izay avo lenta. Na izany aza, raha mahatsikaritra fa miha-matanjaka bebe kokoa ny vokany, dia tokony hifantina dokotera ianao.
Ny aretin'andoha dia mahazatra amin'ny racetam nootropics satria mitarika amin'ny famongorana ny tahirin'ny choline ao amin'ny atidoha. Mety hampahory matetika ny fanaintainana, fa ny famonoana ny aretin'andoha kosa dia azonao atao Fasoracetam stack izay manana loharano choline, ohatra, Alpha GPC. Ny fanesorana ny dòz tsy mety sy ny fatran'ny tsy fampiasana dia voamariky ny fahatsapana fanaintainana amin'ny lohanao, ary tokony ho azo antoka fa ianao dia mitondra ny dosage mety Fasoracetam. Raha misy kansera, manaova sipa satria manampy hamerenana ny atidoha. Azonao atao ihany koa ny mampitombo ny habetsahan'ny rano azonao.
Ny olona sasany dia mety hijaly noho ny tsy fitandremana ary mety tsy afaka mandamina ny eritreritr'izy ireo araka ny tokony ho izy aorianana aorian'ny fanangonana Fasoracetam. Ny zavatra tsara dia ny fahatsapana ny fahatsapana aorian'ny fotoana.
Ny mahametim-bidy dia iray amin'ireo vokatra izay nolazain'ny olona fa mijaly indrindra indrindra amin'ny tranga voalohany taorian'ny fampiasana izany. Nilaza izy ireo fa mihena ny fahamaizan'ny menaka taorian'ny fampiasana ny famenony nandritra ny fotoana fohy.
Ho an'ny hafa, io zava-mahadomelina io dia milaza fa misy fiantraikany ratsy amin'ny fiainany ara-pananahana amin'ny fampihenana ny libido sy fampihenana ny orgasma. Ny fampiasana ny fanamafisana ny firaisana ara-nofo dia afaka manampy amin'ny fanoherana ity vokatra Fasoracetam ity.
Rehefa alainao haingana be ny Fasoracetam ianao, dia mety tsy ho matory ianao. Izany no antony nanomezanao torohevitra omena ny dosie nomeny satria manampy anao ny torimaso tsara.
6.User Review sy ny fanandramana ny fampiasana Fasoracetam
Na dia mety ho tezitra mafy amin'ny fanombohana ny dosage Fasoracetam aza ianao, mety ho tianao ny hahalala raha miasa amin'ny olona efa nampiasa azy io taloha. Ho an'ny hafa, mety tsy dia miraharaha ny fampiasana azy izy ireo ary te hihaino ny tantaran'ny olona iray hafa mba handraisany fanapahan-kevitra tsara. Tsy vitan'ny hoe hanampy anao hiorina ao an-tsainao fotsiny izany fa manome toky anao fa ny Fasoracetam no làlana handeha.
Hatreto, Fasoracetam dia nampiasa olona maro tamin'ny fomba mahomby sy mahomby, ary ny ankamaroan'ireo izay nampiasa azy io dia nanana traikefa tsara tamin'ny maro milaza fa niova tanteraka ny fiainan'izy ireo ary maniry ny hahafantarany an'ity taona maro ity. Ireto ny sasany amin'ireo fanadihadiana momba ny Fasoracetam izay azontsika tamin'ny mpanjifantsika
Luli dia niteny hoe "Volana vitsy lasa izay dia nizaka ny fahatsiarovan-tena aho ary izany no fotoana tena nanahirana indrindra teo amin'ny fiainako. Nitsidika dokotera maromaro aho, kanefa tsy nisy ny fanafody nomena ahy. Nalahelo mafy aho ary tsy nanontany tena intsony hoe inona no mety ho nahatonga izany. Izaho dia 30 fotsiny, ary tsy mahatsiaro ny anaran'ny namako mihitsy aza aho. Soa ihany fa nasain'ny mpiara-miasa tamiko miasa aho hampiasa ny Fasoracetam ary hatramin'ny naniriako ny fanampiana, dia nandidy izany ho ahy izy tao amin'ny Phcoker.com tamin'io andro io ihany. Tao anatin'izay efatra herinandro dia nihatsara ny fitadidiako. Nientam-po be aho ary tsy afaka nisaotra ny mpiara-miasa amiko ary ity toerana mahafinaritra ity. Amin'izao fotoana izao dia afaka mahatsiaro ny zava-drehetra aho. Ny namako dia miteny fa afaka mahatsiaro zavatra izay tsy tadiaviko akory. Azoko atao ny manolotra any Fasoracetam amin'ireo izay mijaly noho ny fahaverezan'ny fahatsiarovana. "
Hoy i Juan: "Nijaly tamin'ny ADHD ny zanako lahy, ary nametraka fanafody marobe ny dokoterany. Nanampy azy ireo hatrany izy rehetra, ary nanitrikitrika ahy izany. Nandany ora maro aho mba hanao fikarohana momba ity toe-javatra ity sy ny fomba ahafahantsika mifehy azy. Soa ihany aho nahita fitsapana tsara momba ny Fasoracetam izay nisarika ny saiko. Nandidy azy aho, ary izahay Fasoracetam traikefa tena nahafinaritra. Nanampy ny zanako tany an-tsekoly ilay fanafody, ary mpianatra tsara kokoa izy izao. Fotoana telo herinandro vao nanomboka nahamarika fiovana teo aminy izy, ary faly aho fa nahafantatra momba Fasoracetam. Raha manana olana toy izany ianao, dia hamporisika anao aho hanandrana izany. "
Hoy i Bai: "Tsy fantatro ny antony nahatonga ny fahombiazan'ny fahantrana sy ny fahaverezan-tsaina teo amin'ny fiainako. Very ny fifantohana sy ny fifantohana taorian'ny ora vitsy niasako tao am-piasana. Nitaraina foana ny zokiko, ary tsy maintsy nitady fanampiana aho. Taorian'ny fampiasana Fasoracetam nandritra ny fotoana fohy, dia mahatsiaro ho tsara aho. Mahatsiaro ho maivana aho, miverina ny fifantohako sy ny fifantohana, ary afaka miasa mandritra ny tontolo andro tsy misy fahatsapana tahaka ny atidohako dia mihena be loatra. Mazava ny ao an-tsaiko ary manao asa feno aho atsy ho atsy. Fantatro fa tsy misy zava-mitranga izany, fa ny olon-drehetra ao am-piasana dia manontany ahy izay nampiasaiko. Tsy antsoin'izy ireo intsony ny taolam-paty izay efa nampiasainy ary nanolotra ahy ho mpiasa mendrika indrindra ao amin'ny departemantantsika. Ho an'ireo izay mbola misalasala momba ity fanampiana ity dia hangataka anao aho mba hipetraka amin'ny Fividianana Fasoracetam satria sarobidy isam-bolana izay laninao. "
Hoy i Chen, "Efa nampiasa ny Phcoker.com aho nandritra ny fotoana fohy, ary tamin'ny fotoana rehetra, dia nahafinaritra ahy ny fanompoana. Io no hany tranonkala manana ny fanohanan'ny mpanjifa tsara indrindra ary ny fivarotana tsotra dia tsotra. Tsy mba nanana olana tamin'ny azy ireo aho, ary efa nahazo ny fonosako foana aho. Phcoker dia jiro amin'ny toerana iray mijery ny vidiny sarobidy indrindra sy ny kalitao tsara indrindra. Matoky azy ireo foana aho amin'ny fahasalamako, ary nanome baiko fotsiny ho an'ny Fasoracetam aho, ary matoky aho fa ny traikefako Fasoracetam dia ho tsara. Halefako ao anatin'ny iray volana ny fijery momba ny Fasoracetam. Raha sasatra ny mividy fanafody ianao ary tsy mendrika ny volanao, dia tokony ho ilay tranonkala mandeha ho anao ny Phcoker.com. "
Hoy i Fan: "Nieritreritra aho tamin'ny faran'ny semester fa tsy ho vitako ny fanadramako satria nahatsikaritra amnesia malemy aho. Nahatsiahy be loatra aho satria tsy azoko an-tsaina ny tsy fahombiazana rehefa niasa mafy nandritra ny semester. Nampianatra ahy tamin'ny Fasoracetam ny mpiara-mianatra tamiko, ary tsy niherika aho hatramin'izao. Nihanitatra ny fahaizako ara-tsaina, ary tsaroako fa saika ny zavatra rehetra nampianarina tany am-pianarana. Vao nahazo ny vokatra farany tamin'ny semester aho, ary tsy mbola nahavita izany tsara aho hatramin'ny nidirako tao an-tsekoly. Tsy mahatsiaro ny zavona ao amin'ny atidoha aho, ary lasa be mpitia ity fanampiana ity. Ny zavatra niainako Fasoracetam dia tsotra fotsiny! "
Jinhai dia miteny hoe, "Ny rahalahiko dia miady amin'ny fahaketrahana sy ny fanahiana, ary vao haingana dia nanomboka namono tena izy. Nandreraka anay ara-pihetseham-po amin'ny maha-fianakaviana anay izany satria tsy misy zavatra toa mahomby. Ny fitsaboana sy ny paikady rehetra dia toa tahaka ny fandaniam-bola. Ny sasany tamin'ireo fanafodiny dia niasa nandritra ny fotoana fohy ny sasany nandao azy noho ny olana goavambe. Hatramin'ny naman'ny olona iray izay nijaly noho izany dia nanome fijery tsara momba ny Fasoracetam. Hatramin'izay fotoana izay, ny zava-drehetra dia nanao fihodinana. Volana iray monja taorian'ny nanombohany nisotro medikaly ary misy fahasamihafana goavana amin'ny fanafihana mitebiteby. Miaiky izy fa mahalana no mahatsapa ny eritreritra mandalo ary mankafy ny torimaso. Hatreto dia lasa niova tsikelikely ny fahazaran-dratsiny, ary azontsika ambara daholo izany any Fasoracetam. "
Hoy i Jun: "Rehefa nahavita ny fividianana Fasoracetam tapa-bolana lasa izay aho ary nitondra azy io ara-pivavahana dia faly aho nilaza fa tena nanampy ahy izany. Nihatsara ny fihetseham-poko teo amin'ny fihetseham-poko, ary mahatsapa fifaliana bebe kokoa noho ny taloha aho talohan'ny nanombohana azy. Nihalehibe ny heriko ary tsy mahatsiaro ho reraka intsony aho. Na dia tsaratsara kokoa aza, dia afaka manatontosa ny andraikitro isan'andro aho izao raha tsy mila ny fialan-tsasatra. Amin'ny 60, afaka matoky aho fa mbola tsy nahatsapa izany soa izany teo amin'ny fiainako. Aza adinoina fa matory toy ny zazakely aho aorian'ny andro tena tsara. Tsy isalasalana fa hanoroako izany ho an'izay mila hatsaranao amin'ny fahatsapany. "
Ny tsirairay dia manantena ny ho sintona kokoa noho izy / izy. Na dia tsy ela loatra aza, ny fahatsapan'ny mpihira mandritra ny fotoana fohy dia afaka manatsara ny fanehoana ny fitiavan-tena. Ny poezia Fasoracetam dia tsy dia malaza amin'ny mpianatra ihany, fa kosa dia mora ihany koa ho an'ny olon-kafa izay maniry hanana saina maranitra izay mety hanangona betsaka. Ankoatra izay, ny olona rehetra te-hijanona eo alohan'ny hafa dia mitazona bebe kokoa ny zavatra entiny, ary mahatsiaro tsara ny zava-drehetra izay ilainy tsaroana dia mety handray soa avy amin'ny zavatra tsy misy dikany. Ho fanampin'izany, ny Fasoracetam dia mahomby amin'ny fiatrehana ny sasany amin'ireo aretina sy toe-javatra iainantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro.
Raha tadidinao fa ny Fasoracetam dia tsy mampiditra ny vondrona hafahafa ao amin'ny vatanao fa manome ny choline izay fanalahidy tena ilaina amin'ny vatanao mba hanatsarana ny famokarana acetylcholine. Antony ampy handresena lahatra anao fa ity fanampiny ity dia midika fotsiny hoe tsara ho an'ny vatanao. Na izany aza, mila mila mpanolo-tsaina azo itokisana ianao izay hanome antoka anao ny vokatra tsara.
Miaraka amin'ireo tombony rehetra omen'ity nootropic ity dia azonao atao ny mahafantatra izay azonao azonao atao amin'ny Fasoracetam. Indrisy anefa fa maro ny olona te hanangona vola avy aminao, ka azo inoana fa hividy ny Fasoracetam ianao, ary mety tsy hanome anao ny vokatra tianao izany. Ny sasany dia mety tsy ahitana ny vata Fasoracetam raha toa ny sasany mety tsy manana ny fifantohana marina araka ny marika eo amin'ny labozia. Midika izany fa vola fotsiny ny fandaniana ary mety hisy fiantraikany eo amin'ny fahasalamanao raha misy zavatra mampidi-doza. Mba ho azo antoka, tokony ho fantatra ny mpamatsy mandeha any amin'izay azonao azonao hividianana Fasoracetam an-tserasera.
Noho izany raha mitady tranokala ahafahanao mividy Fasoracetam amin'ny aterineto ianao Phcoker.com no toerana tsara indrindra. Toerana azo itokisana izahay afaka ataonao Fividianana Fasoracetam ary mahazo ny mari-pahaizana ambony indrindra eo amin'ny tsena. Tsy tahaka ireo tranonkala hafa izay mety hahalasa anao amin'ny fampifangaroana ny vovoka Fasoracetam amin'ny binders sy ny fillers, ny antsika dia 100% authentic.
Hanolotra anao amin'ny Fasoracetam ianao amin'ny vidiny sarobidy indrindra amin'ny tsena, tsy manelingelina ny fahombiazany sy ny kalitaony. Ao amin'ny tranokalanay, manolotra ihany koa izahay powders nootropic bulk ho an'ny varotra amin'ny vidin'ny namana. Mety halaim-panahy ianao hividy ny vidiny mora kokoa, nefa mariho foana fa mora kokoa ny vokatra, mety hampidi-doza ny vidiny. Safidinao ny manao fampiasam-bola izay mendrika ny volanao. Miantoka foana ny vokatra azo avy amin'ny mpanjifa izahay, ary aorian'ny fampiasana ny vokatrao, dia hanomboka hahatsapa ny vokatra ao anatin'ny fotoana fohy ianao. Ny tombontsoa iray hafa izay azo avy amin'ny fividianana ny vokatray dia ny fametrahana ny famandrihana na aiza na aiza. Raha vao nandidy anay ianao dia azonao antoka fa ho azonao antoka tsara ny fonosanao ao anatin'ny fotoana fohy. Raha te hividy ihany koa ianao powders nootropic bulk, dia nahazo ny tsara indrindra ho anao izahay.
Mividiana Fasoracetam antsika amin'izao fotoana izao ary hampivoatra ny fahaizan'ny atidohantsika hanatanteraka asa amin'ny fotoana fohy sy amin'ny fomba tsara indrindra.
Merchan, C., Morgan, R., Papadopoulos, J., & Fridman, D. (2016). Overdose Phenibut amin'ny fampifangaroana amin'ny Fasoracetam: fisotroan-dronono mahatsiravina. Journal of Clinical Intensive Care and Medicine, 1, 001-004.
Elia, J., Ungal, G., Kao, C., Ambrosini, A., Jesus-Rosario, N., Larsen, L. ... & Sykes, B. (2018). Fasoracetam amin'ny adolescents amin'ny ADHD sy ny glutamatergic varieta varotra varotra manelingelina ny famantarana ny neurotransmitter mGluR. Nature Communications, 9 (1), 4.
Harmsen, B., Robeyns, K., Wouters, J., & Leyssens, T. (2017). Fandalinana ny endriky ny Solid State amin'ny endrika Fasoracetam: Toeram-pitsaboana Anti-Alzheimer Potential. Journal of science, 106 (5), 1317-1321.
Sarm RAD140 (Testolone) Niteny ny mpampiasa: Fanamarihana, Ampiasao ireo dingana, Fahasahiranana